စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ယန္တရားများ
ယန္တရားများကိုရှေးခေတ်ကတည်းကလေ့လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးသင့်တီထွင်မှုကိုတီထွင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ရှုထောင့်မှလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
အင်ဂျင်နီယာ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စက်ရုပ်များသည်ယန္တရားများလိုအပ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သည့်အရာများလုပ်ဆောင်သည်၊ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်၊ သင်၏စီမံကိန်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည့်နည်းလမ်းများနှင့်အသစ်သောယန္တရားအသစ်များကိုသင်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။
လီဗာသည်ယန္တရား၊ cam၊ Archimedean ဝက်အူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာထဲကိုဝင်ကြမယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်တီထွင်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့်အခြားတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်အသုံးဝင်ရုံသာမက၎င်းတို့ကို၎င်းကိုမသိသေးသည့်တိုင်သိရန်လိုအပ်သည်။
Square Hole လေ့ကျင့်ခန်း Bit
Eduardo Mier ကသူကိုမင်းကိုပြချင်တာဟာတကယ်ကိုသိချင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအကြောင်းသတိပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာ ... အပေါ် Read
ဒီ UJI (Universitat Jaume I) ရဲ့ link ကတဆင့်ကျနော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့ယန္တရားအချို့ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ် Read
၏လူများကိုကျေးဇူးတင်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအရာ twitter အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ကိုခေါင်းစဉ်ရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက်ကူညီပေးခဲ့တယ် Archimedes ၏ရထား, အဆုံး၌ Archimedean Compass အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့« Archimedean trammel »နှင့်အခြားချဉ်းကပ်မှု« Archimedean Lattice »ကိုစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @February 1, @sophocles, @ V4nhel နှင့်ဘာသာပြန်ချက်တွေ့ပြီသူ @ScienceKanija
ငါပါမယ် dynamic ဂျီသြမေတြီ Jansen ရဲ့ယန္တရားတစ်ခုဗီဒီယိုနှင့်အတူ။
အိမ်လုပ် Heron စမ်းရေတွင်းတစ်ခုလုပ်နည်း
ငါတို့မြင်ပြီ ကလိ, အ Eolipilla သို့မဟုတ် Heron ၏ Aeolus, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သေးမြင်ကြဘူး အလက်ဇန္ဒြီးယားမြို့ရှိ Heron မှဖန်တီးသောဟိုက်ဒရောလစ်စက်ဖြစ်သော Heron's Fountain (ပထမရာစုရူပဗေဒပညာရှင်၊ သင်္ချာပညာရှင်နှင့်အင်ဂျင်နီယာ) အရည်ဒိုင်းနမစ်.
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းရှေးအကျဆုံးဗားရှင်း, Heron ၏, ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရေသည် A မှ C သို့ (လေနှင့်လေနှင့်ပြည့်။ ) မှ C သို့လေကို B သို့ (ရေနှင့်ပြည့်သည်) သို့တွန်းပို့သည်။ ၎င်းသည်ရေကိုအေဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။
ပုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစပြုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်သောအဆို့ရှင်များစွာရှိသည်။ သင်မြင်ရသည့်အတိုင်း၎င်းကို ပို၍ လုပ်ရန်လုပ်နိုင်သည်။
ပုံအရသိရသည်။ အစကန ဦး တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် valves သုံးခုကိုပိတ်ထားပြီး A. တွင်ရေထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် V2 ကိုဖွင့်ပြီး tank B သည်ဖြည့်ပြီး V3 ကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်လေထုဖိအားသို့ရောက်လိမ့်မည်။ Valve နှစ်ခုကိုပိတ်ပြီး source စတင်အလုပ်လုပ်ရန် V1 ကိုဖွင့်သည်။
အခွင့်အလမ်းနည်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအချို့တွေ့တယ် Binary စကျင်ကျောက်ထည့်သွင်းစက် o စကျင်ကျောက်နှင့်အတူ Binary ထည့်သွင်းစက်
ဂီယာတည်ဆောက်ရန် template generator
Microsiervos ကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ သူတို့သည်ဂီယာတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်တင်းပလိတ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့် web application တစ်ခုအကြောင်းပြောနေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီ။ အပေါ် Read